Sida loo Delete Photos ka iPhone macruufka 8 / iOS7
Sida loo Delete Photos ka iPhone (iPhone 6s Plus iyo 6s iPhone mid)
Dadka intooda badan tirtirto sawiro ka iPhone inta badan, sababtoo ah photos mashquulin meel aad u badan. Baadhitaan aynu samaynay muujinaysa in ka badan 42,37% dadka leedahay in ka badan 400 photos on iyaga u gaar ah iPhone, iyo 26,49% dadka leedahay in ka badan 800 photos ay telefoonka. Waa adag tahay in ay rumaysan, sax? Taas ayaana runta ah. Guud ahaan, 750 photos degi doono 1.7GB. Haddii aad iPhone yimaado kaliya 16GB, markaa in aad qaado talaabo qaar ka mid ah si lacag la'aan ah ilaa meel joogto ah. Oo mid ficil ah waa in la tirtiro sawiro ka iPhone. Dooro sida saxda hoose si aad sawiro ka iPhone ka saar sida ay baahidaada.
Qaybta 1. Talaabooyinka in ay tirtirto Photos on Your iPhone Gacanta
Qaybta 2. Si dhakhso ah Delete All Photos ka iPhone, labadaba Camera Roll (photos qabsaday) oo Photo Library (photos synced ka Lugood)
Qaybta 3. Si joogto ah Delete Photos ka iPhone
Haddii aad dooneyso in aad tirtirto ka yar 10 photos aad iPhone, ka dibna kaliya aad u baahan tahay si ay u tirtirto gacanta ku saabsan iPhone. Waa mid aad u fudud in hawsha ay u dhammaystiraan.
Tubada app Photos aad iPhone, iyo furi heestii sawiro aad rabto in aad tirtirto meeye. Tuubada 'Select' doorasho on xaq u sareeya. Markaas ka jaftaa mid ka mid ah sawirrada oo ay ka mid si ay u doortaan. Ka dib markaas, ka jaftaa qubka yaal dhinaca midigta hoose. In ka-up pop, waxay kuu sheegi doonaan sida sawiro badan oo la doonayo in la tirtiro. Tubada badhanka si loo xaqiijiyo Kabcada_. Taasi waa.
Haddii aad la casriyeeyay aad iPhone in macruufka 9 ama aad isticmaalayso iPhone 6s / iPhone 6s Plus, in ay tirtirto photos, waa in aad ku sawirnaa Photos app> furan 'Recently Added'> tuubada 'Dooro'> sawiro la xusho oo ka jaftaa qashin qubka ee geeska hoose ee saxda ah.
Fiiro gaar ah: dib marka la tirtiro sawiro ka iPhone 6s / iPhone 6s Plus ama iPhone kale socda ee macruufka 9, aad sawiro tirtiray run ahaantii ma isla markiiba u tag. Waxa ay wareejiyey galka 'Recently masaxay' ka halkaas oo sawiro tirtiray waxa lagu hayn doona muddo 30 maalmood ah. Haddii aad sidoo kale dooneynaa inaan ka kaxeeyo waxaa, u tag 'Recently masaxay'> tuubada 'Dooro'> dooran photos> tuubada "Delete 'inuu iyaga ka dhaqaajiyo. Oo waxaad arki kartaa in 'Recently masaxay' folder, ka dib markii xulashada photos, waxaa jira fursad kale 'Ladnaansho'. Waxaad riix kartaa waxa ay ku soo kabsadaan sawirada aad tirtiray aad iPhone.
Qaybta 2. Si dhakhso ah Delete All Photos ka iPhone, labadaba Camera Roll (photos qabsaday) oo Photo Library (synced ka Lugood)
Dadka qaar ayaa sheegaya in ay doonayaan si ay u tirtirto si deg deg ah oo dhan sawiro ka iPhone. Taasi waa mid aad u fudud. Waxaad tirtiri kartaa oo dhan sawiro ka iPhone adigoo raacaya habka hoos ku qoran:
Delete oo dhan sawiro ka Roll Camera (photos qabsadeen aad iPhone)
Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone la your computer, labada Mac iyo Windows computer samayn doonaa. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, kadibna aan biloowno Ciidamada Image ama iPhoto aad Mac. In galeeysid bidix, guji si aad iPhone. In dhanka midig, dooro oo dhan photos iyo guji icon delete in ay tirtirto oo dhan sawiro ka iPhone Camera Roll. Haddii aad isticmaali iPhoto in ay sawiro gurmad ka iPhone in aad Mac, ka dib markii gurmad ah, a pop-up sidoo kale ka soo muuqan doonaa, weydiinaya in aad tirtirto oo dhan sawiro ama aan. Xaqiiji Kabcada_. Haddii aad isticmaalayso PC Windows ah, ka dib markii isku xidha aad iPhone aad PC, ee 'My Computer', aad u ogaato iPhone oo guji si aad u furto. In gal, ka heli dooro oo dhan sawiro. Riix muhiim ah 'tirtirto' in ay tirtirto oo dhan sawiro ka iPhone Camera Roll.
Delete oo dhan sawiro ka Photo Library (photos synced ka Lugood)
Connect aad iPhone la your computer via cable USB ah oo aan bilowno Lugood. Riix si aad iPhone in Lugood iyo falgali in tab ka Photos ka halkaas oo aad synced sawiradaada. In ay jiraan, ka fiiri 'nidaameed Photos ka' iyo dooran folder madhan si hagaagsan sawiro aad iPhone. Ka dib markaas, waxaad arki kartaa in dhammaan photos synced aad iPhone kaliya tageen.
Hababka soo bandhigay in Qaybta 1aad iyo Qaybta 2aad tirtiri kartaa sawiro ka iPhone, laakiin aan ka iPhone tirtiri kartaa sawiro gabi ahaanba. Iyada oo software ah, Wondershare Dr.Fone ee macruufka, waxaad samayn kartaa kabsado photos tirtiray ka iPhone si fudud. Waxaa loola jeedaa haddii aad iPhone dhamaadaa dadka kale ee gacanta oo aad leedahay qaar ka mid ah sawirrada oo muhiim ah, markaas waa mid aad u khatar ah, waayo dadka soo kaban karto iyaga. Taasi waa sababta nudes qaar caan ah ayaa daadatay si fudud u. Xaaladdan oo kale, waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad si joogto ah u tirtirto sawiro ka iPhone. Si aad u samayn, waa in aad isticmaasho SafeEraser Wondershare . Waxaa la sameeyey si loo masixi sawiro ka iPhone si ammaan ah. Ka dib waxaa la isticmaalayo, xitaa Dr.Fone ee macruufka ma soo kaban karto wax sawiro ka iPhone. Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka la qaadayo si joogto ah u tirtirto sawiro ka iPhone la SafeEraser Wondershare.
Tallaabada 1 photos Delete ka iPhone
Photos Open app aad iPhone. Raadi sawiro aad rabto inaad tirtirto. Tubada 'Dooro' in ay doortaan sawirada iyo tubbada ah qashin qubka ee geeska hoose ee xaq u leedahay in manully iyaga tirtirto.
Haddii aad iPhone waa iPhone 6s, iPhone 6s Plus ama iPhone wax socda ee macruufka 9, hore tirtirto photos ee 'Recently Added'. Oo markaas ka dibna la furo galka 'Recently masaxay', u isticmaalaan si la mid ah si ay u tirtirto sawirada aad uma baahna in folder.
Tallaabada 2 Download iyo rakibi Wondershare SafeEraser
Labada Wondershare SafeEraser (Windows) iyo Wondershare SafeEraser u Mac diyaar u yihiin inay la soo bixi. Riix badhanka download si aad u hesho xirmo rakibo. Ku rakib iyo waxa maamula on your computer. Connect aad iPhone si aad u computer via cable USB ah.
Tallaabada 3 Scan for photos delete on iPhone
In aasaasiga ah, ku dhufo "masixi tirtiray Faylal ay 'si aynu barnaamijka si ay baarista iPhone for photos tirtiray. Waxaa laga yaabaa inay qaadato dhowr ilbiriqsi dhammayn nidaamka.
Tallaabada 4 ka iPhone Delete sawiro si buuxda
In bogga natiijada, hubi 'Sawiro' oo guji 'masixi Hadda'. Hay iPhone ku xiran inta ay socoto. Marka waxa ay si guul leh tirtiray sawiro ka iPhone, daaqad kuu sheegi doonaa.
Download SafeEraser Wondershare in ay isku day ah hadda!
Sida loo hagaagsan iPhone 2 Kombiyuutaro oo aan laga badinin Data
> Resource > iPhone > Sida loo Delete Photos ka iPhone